Daacish oo hooyo iyo wiilkeeda ku dishay gobolka Bari – Radio Daljir
Oktoobar 19, 2017 11:12 b 0
Ururka Daacish oo ka mid ah ururada hubaysan ee dagaalka kawada wadanka Soomaaliya ayaa ku dilay laba qof deegaanka Canjeel oo katirsan degmada Bali-dhidin ee gobolka Bari.
Wararka aanu ka helayno deegaanka ayaa sheegaya dilka inuu dhacay kadib markii kooxda daacish ay soo gashay deegaanka iygoona kasoo degay dhulka beeralayda ee deegaankaasi u dhow, waxaana dilka uu dhacay habeenimadii xalay.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay radio Daljir inaan la aqoon sababta dilka, balse haweynayda la dilay uu qabay askari katirsan ciidamada dowladda, waxaana wiilkeeda la dilayna uu ahaa ruux aan la hayn maqalka oo dhagool ah.
Daacish ayaa horay looga saaray deegaano katirsan degmada Qandala ee gobolka Bari, balse waxaa ay wali ku suganyihiin dhulka buuraha ee deegaankaasi ku hareeraysan.
Isgooyska Soobe oo lagu xasuusan doono dadkii ku shahiiday weerarkii 14ka Oktoobar